प्राप्त गर्न कहाँ जर्मनी । बीचमा आफ्नै
त्यहाँ एक समूह महिलाहरु छलफल जहाँ यो सम्भव छ आज पूरा सभ्य मानिसहरू छैन केवल रात बिताउन (हुनत यो उपयोगी छ, जो तर्क गर्न सक्छन्), र योजना पछिसम्म । र हामी कुरा थिए डेटिङ साइटहरु. हामी कुरा गरिरहेका छौं बारे जर्मनी, अवस्था कस्तो छ, जर्मनी मा — म कुनै विचार छ । यस सन्दर्भमा म हुनुपर्छ खराब चेस साथी देखि, उन्नाइस वर्ष, लगभग सबै समय बाहेक, लागि छोटो समय हो, विवाह । विभिन्न मानिसहरू, तर जो साँच्चै दिन्छिन् ध्यान सानो कुरा । यो बिन्दु छ कि एक लामो -लामो समय थियो छैन देख कुनै लागि र शायद सक्छ मात्र, तर छ । यो स्पष्ट छ कि राजकुमार पर्याप्त छैनन् । सेतो घोडा थियो लङ्गडा, सवार गरेको पखाला, तपाईं भूल गर्न ढोका खोल्न उहाँलाई लागि जब उहाँले चढेर तीन किलोमिटर, ढोका ढकढक्याउनुभयो गर्न आफ्नो. किनभने मां अनुहार मा थिए राजकुमार पर्खिरहेका हेर्न । कसले थाह छ कि उहाँले के छ. वास्तवमा भन्ने भाग्य र आनन्दित अवसरमा तपाईं शायद प्रतीक्षा एक जीवनकालमा छ । र प्रतीक्षा कहिल्यै. र गलत केही, त्यहाँ छ भन्ने तथ्यलाई को भाग्य यो, वा मामला, या जो, एक सानो मदत । देखि श्रृंखला ‘क्याच-फसाउन छैन, तर कम से कम न्यानो प्राप्त’ यहाँ मलाई मार्न, तर म बिल्कुल हुँ भनेर विश्वस्त अधिक संभावना मा पाउन सकिन्छ क्लबहरू । खैर, छैन मा क्लब, खैर, यो भनिन्छ गर्नुपर्छ, जर्मन मा छ । र, वा केहि.
त्यहाँ जहाँ धेरै पुष्ट, फिट, राम्रो- र धनी मानिसहरू छन् । मलाई थाहा छ यो शब्द ‘गरिब’ यहाँ, शायद धेरै, तर हामी सबै छौं, वयस्क हो । र प्रो संग मीठो स्वर्ग मा एक पाल,’ हामी सबै सिकाइएको र पढ्न बारेमा पुस्तकमा स्वादिष्ट र स्वस्थ खाना. ऊ, कोड बिल्डर्स साम्यवाद को छ । खराब विचार र जायज छैन, हाय । र बारे साम्यवाद, र बारे मा प्रमोदवनमा एक पाल । दुवै विचार साबित भयो बेकम्मा छ । त्यसैले गरौं सबै भन्दा राम्रो मानिस हुनेछ गैर-गरिब भन्दा गरिब छ । यो मलाई देखिन्छ भने, एक बिट देखि काटिएको वैवाहिक मनसाय, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ छ एक सामान्य क्षेत्र एक साथी संग साझा, एक सेट को गतिविधिलाई र सोख, मान । डेटिङ साइटहरूमा यो सजिलो छैन मूल्याङकन गर्नु छ । एक साधारण शौक यसले हामीलाई सँगै । यो के कुरा छैन यो शौक छ । साँच्चै कुरा छैन. बस सांख्यिकीय, शायद अधिक मानिसहरू प्रेम पहाड साइकल भन्दा. र तपाईं हुनुहुन्छ भने, धेरै भाग्यशाली केटी डराएका छैन जो को घुँडा र देखि को बास्ना मानिस पसिना, त्यसपछि तपाईं गर्न सक्छन् त्यहाँ । पाँच वर्ष पहिले म मिल्यो नौका सही । यहाँ मा. यस्तो संख्या को प्यारा, विनम्र, पुष्ट र गरिब मानिसहरू जो बताउन चाहनुहुन्छ, मलाई मूर्ख, के गरेको यो भनिन्छ, यो नौका गर्न पार्क, बाँध कसरी मल्लाह गरेको, खराब बिना मैनीक्योर (यसको जवाफ कुनै छ । लिन एक मानिस जो तपाईं नोडहरु. वा कटौती नङ), र छैन गर्न मस्त गरेको खोपडी, मैले देखेको छैन एक लामो समय को लागि छ । म केहि गर्न संग आफ्नो, अध्ययन, मेरो श्रीमान् र मेरो सीमा मा विवाह बसे । र यो विचार.
हामी अध्ययन गरेका मा
म प्रयास गर्नेछ कम्तीमा कुरा गर्न एक सानो बिट बारेमा भेनिस, वा पछि पूरा हुनेछ. म छु भेनिस मा चौथो समय, र म प्राप्त गर्न चाहन्थे बिल्कुल को थकित यी दिन बबी, थकित, सबै दिन साँझ आँखा बन्द आफूलाई प्राप्त र अर्को दिन माथि. र अब सुतेको गिरने, म बस देख्यो को»मन नपराउने». मा एक को सडकमा डुसेल्डर्फ. त्यसैले फेरि, नेटवर्क कीटविज्ञानी. पहिलो, कुरा गरेर एक असल मित्र संग. त्यो एक महिला संग एक धेरै संकटग्रस्त विगतमा छ । धेरै वर्ष पहिले, जर्मनी, जङ्गली मा औं पतिको मृत्यु भयो । त्यो एक्लै छोडिएको थियो तर एक पूर्ण विभिन्न क्रोएशियाई शहर । शैली विला É छ । भवन — रसीला, — पटक, शुद्ध. यो सिकेको छ कि गम्भीर बिरामी एक धेरै राम्रो मानिस हो । र कुनै मदत । हामी एक पटक थियो एक सम्बन्ध, सारा सयौं वर्ष पहिले. सम्बन्ध जवाफ दिए पोस्ट मा अन्य एफओबी यो असर कसरी सजिलै मान्छे प्रत्येक अन्य परिवर्तन मा जस्तो देखिने खुसी परिवार छ । लेखे पढ्न यहाँ, यो लाममा बसिरहेका थिए, र अनुपयुक्त महिलाहरु स्थानीय समुदाय । म भावना मा वसन्त महिलाहरु काम गरिएको छ सक्रिय, दुई कुराहरू, बस दुई शब्द । धेरै दुःखी, एक मेला विषय हो । खराब मुड. सबै पक्षलाई देखि म सिर्फ लाग्छ कि बाटो हेर्न को लागि अधिक तार्किक छ । यसबाहेक उत्साहित हुनुको बारेमा कुरा मानिस बस ठूलो छ. विचार राम्रो छ, तर मेरो पति छ यो गर्मी, यो हामी सँगै हुन त के? अध्ययन सँगै स्कूल मा, तर विवाह अघि गत वर्ष को संस्थान । रूपमा ‘मा मास्को आँसु विश्वास गर्दैन’, नायिका को केहि भन्न अघि मेरो पति हुनेछ सामान्य मा, यो आवश्यक छ वरिपरि यात्रा गर्न, गर्न धक्का वरिपरि । हामी सुरु संग एक पाल, अहिले यो घर ।, म.) हामी पनि छन् यो हट थाले । म भन्न हुनेछ, छैन पनि आश्रय, एक दफन. सम्झना ‘छोराछोरीलाई को भूमिगत’. म भेट बेरोजगार युवा चिकित्सक पूरा भएको छ, जसले रूपमा काम एक मा एक नर्सिङ, घर र भएको एक मेडिकल डिग्री र काम तीन वर्ष मा सेन्ट पिटर्सवर्ग मा ‘एंबुलेंस’ थियो, कुनै सही अभ्यास गर्न चिकित्सा जर्मनी मा. तर म दिनेछु आफ्नो विकल्प छ — म जाने कहीं त्यहाँ प्रक्रिया मा पाउन. पनि अक्सर छन्, एकल पुरुष हेर्नुहोस् । खैर, लागि बाहेक यात्राहरु जहाँ लगभग सबै जोडे. म चाहन्थे बारेमा लेख्न होटल को लागि एकल, राजभाषा, तर म मिल्यो खलबलिएको बिरालोहरु पर्याप्त छैन भनेर होटल लागि एकल — त्यहाँ छन् सबै प्रकारका विषयगत यात्राको चासो छ । एउटै ट्रैकिंग सबै प्रकारका, बहु-सक्रिय, जब मान्छे र, रोविङ, र बाइक सवारी, र पर्वतमा चल्छ । यस्तो सक्रिय बिदाहरू संग एक धेरै एक्लो -बस नै, किनभने परिवार सधैं छैनन् सुविधाजनक छ । मेरो मित्र वर्ष को एक जोडी पहिले अलग देखि उनको पति र गए बस केही लडाई, अब सधैंभरि ढाकिएको चोटपटक चल्छ र फेला प्रशिक्षक, धेरै राम्रो, र सामान्य मा, तर उहाँले, जस्तै, एक प्रेमिका छ. त्यसैले म छु कौतूहलपूर्वक हेरिरहेका घटनाक्रमहरूले । सामान्य मा, सबै सही हुनुहुन्छ सबै अधिकार आफ्नो केटी । र निराशा देखि एक छोडपत्र पछि, सबै भन्दा राम्रो तरिका बचत गर्न स्विच गर्न छ केही नयाँ गतिविधिहरु, र व्यक्तिगत जीवनको व्यवस्था छ । तिनीहरूले टाई, पक्कै छ । र त्यो राम्रो, पुष्ट र विनम्र, पनि साँचो हो । तर, छैन भन्ने तथ्यलाई कि एकल र विवाह गर्न उत्सुक).
कुनै, राम्रो, हाँ
वास्तवमा यो वास्तवमा छ । साथै, डेटिङ साइटहरु मा मेरो समझ यो छ छैन भन्ने तथ्यलाई देख मान्छे को लागि एक जीवन साथी, एक मसालेदार साहसिक । राम्रो, म अनुमान गर्न त पछि, उहाँले अझै पनि छ, यी साइटहरु मा थियो — सायद यो आवश्यक थियो जान भन्दा, तालाब भन्दा केहि लेख्न.) त्यहाँ एक प्रकारको साहित्य संग निर्देशन को विषय मा बारे केहि छ । बारे पनि डेटिङ. पुरुष गर्न सिफारिस गरिएको छ मा भर्ना खाना पकाउने वा सिलाई, त्यहाँ गम्भीर छ । खैर, तपाईं देख्न, छैन भन्ने कुरा त म छु उच्च मा जीवन कमाउने यो आवश्यक थियो लेख्न लाभ को बाटो पुग्न राजकुमार र छैन मेरो मित्र, प्रदर्शित संग एक रक्सी-टेस्टिङ घटना प्रेम लागि स्कच व्हिस्की मा हरर चिच्याए ‘हेर जहाँ हाम्रो महिला छन्, तिनीहरू कहाँ जाने । थिए त्यसैले धेरै सुन्दर, फिट मानिसहरू, जो आए र कुनै छल्ले मा औंलाहरु को आपराधिक हो।’ यहाँ म पुच्छ्रेतारा माथि यो भन्छन् भनेर लेख्न, यो मा अमेरिकी पाठ्यपुस्तकबाटै को खोज मा. खराब लेखन अर्थ समय घटनाहरू यस्तो व्हिस्की टेस्टिङ अझै ढाकिएको छैन ।, केही वर्ष पहिले, म पहिले सुरु सेलिंग, मेरो मित्र मित्र देखि काम भने यो राम्रो संग प्राप्त गर्न नाभिकहरु छन्, गरिब मान्छे छैन.) वास्तवमा, गरिब मान्छे छ कि एक नौका मालिक, जो मा सबै भन्दा वर्ष, अन्य सामान्य, तर या त परिवार, वा अत्यन्तै प्यारो गर्ने रक्सी, साथै दौड मा सागर, त्यसैले तिनीहरूलाई देख्न तपाईं शायद. फलस्वरूप, म आफ्नो मित्र भेट मा नौका क्लब, तर म छैन भन्न उहाँले छ कि राम्रो-बन्द छ।) उहाँले अन्य लाभ छ — उदाहरणका लागि, अब हाम्रो छोरी, एक पैदल लागि त म सुत्थ्यौं (बरु, म सिक्न.). गरिब छ, सबै नातेदार छ । मालिकको को यटों मा राम्रो थियो।) साधारण मान्छे को मध्यम वर्ग, एक -पहिले नै मामला छ ।, म छु सबै को लागि छोडेर सान्त्वना क्षेत्र र एक नयाँ शौक छ । र क्षमता लागि कसैले तिमीलाई भेट्न त्यहाँ छ । तर जर्मन कुख्यात छन् र त जान कठिन सम्पर्क गर्न (सबै होइन, तर धेरै). त्यो थिए तपाईं संग जान चाहनुहुन्छ उहाँलाई सेलिंग, र उहाँले संकोच आमन्त्रण गर्न तपाईं को लागि एक कप कफी भनेर सोच, म एक मूर्ख जस्तै, आमन्त्रण, र अचानक त्यो कसैले त्यहाँ छ । मूर्ख हेर्न यो हुनेछ. -) तिनीहरूले साँच्चै कुरा जस्तो । त्यसैले साथै शौक म भूल छैन, यो राम्रो पुरानो डेटिङ साइटहरु. त्यहाँ पक्कै छ धेरै को उम्मेदवार, तर त्यहाँ छन् को एक धेरै सभ्य, गम्भीर मानिसहरू । संग एक फिल्टर को पहिलो श्रेणी धेरै सजिलो छ देखि दोस्रो छ । र खैर, ती लागि जो साँचो हो गर्न सक्छन् सिफारिस गर्न भन्दा मेरो विचार मा सबै भन्दा राम्रो जर्मन डेटिङ साइट छन् । यो राम्रो छ. कि यो बिल्कुल मुक्त छ । मेरो मित्र बाहिर पाइने सिद्ध पति वर्ष सँगै । खैर, म त्यहाँ संग भेट. छैन एक बाधा छ । र यो शौक हुन सक्छ एक ठूलो विचार लागि अनुकूल मिति वा एक संयुक्त छुट्टी छ । हामी छौं भनेर उमेर श्रेणी, छ जब सानो हुन केटाहरू, जवान मानिस संग फिक्का आँखा जल — यो समय हो भनेर देखाउन यो ल्याउन सक्छ ।, तर सेट आवश्यक हुन्छ. म बस, सायद गलत तरिकाले. मेरो लागि, यो राम्रो-बन्द छ. बस एक मानिस, खडा मा आफ्नो खुट्टा छ । के मध्यम वर्ग छ । समर्थन गर्न सक्षम, आफ्नो परिवार सक्षम प्रदान गर्न आफ्नो परिवार (साथ आफ्नो पत्नी वा एक्लै — हरेक परिवार यसको आफ्नै नियम छ), एक अपेक्षाकृत सामान्य जीवन शैली । र छोराछोरीलाई सक्षम कम्तिमा एक पटक एक वर्ष आराम गर्न समुद्र द्वारा केही जूता मा तीन छोराछोरीको परिवार । म बढाउनु छैन, तर तपाईं थाह म के मतलब. अनि हो, उपस्थिति को मात्र जल हेर्न र गर्न आफैलाई एक सानो बिट गलत छ । रूपमा पहिले नै यस्तो लेखे माथि, सारा विश्व. जर्मनी लागि, यो विशेष उपयुक्त छ किनभने आफ्नो. हाम्रो छिमेकी एक चालक, मेरो राय मा, छ, वेबसाइट मा. दोस्रो देखि दाँत डाक्टर पाइन्छ) त्यहाँ छ, लामो छ भने तपाईं जाँच गर्न लागि अनुकूलता मा धेरै मापदण्ड छ । र यो सिस्टम दिन्छ, तपाईं संभावित साझेदार संग जसलाई तपाईं छन्, जो एकदम कम भोजन को विकल्प छ । भनेर पनि खराब अधिकांश उमेर लागि ‘मानिस थियो हुर्केका छोराछोरी र मनोवैज्ञानिक आघात को टन विगतमा सम्बन्ध ((ओह, म मेरो नाच, तीन पटक एक हप्ता लागि कुनै समय सक्रिय सेलिंग र म सधैं विज्ञापन, हो । किनभने यो सुन्दर छ. बारे डेटिङ साइटहरु — हो, तिनीहरूले छन् भन्न धेरै मापदण्ड कि तपाईं सेट गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंलाई मदत गर्नेछ जो पाउन सिद्ध साथी छ । तर म छु छैन एक विशेषज्ञ, म बोल्न मात्र अफवाह. र के बारेमा मानिसहरू । र महिला लागि, यो राख्न, हल्का नभएको मा बहुमत छ । मलाई अब पूरा गर्न — म को उम्मेदवार उपयुक्त हो (छैन उल्लेख गर्न गर्नेहरूलाई बस रूपमा कुनै ठाउँ उपयुक्त छैन म बन्दूक मा क्लब हेर्न । हतियार हामी, एक तरिकामा, एक छलफल छ र यो किन्न, एक रूपमा शासन, ती जो भौतिक बाँकी विषयहरूमा निर्णय गरेको छ । घुँडा तल छ, आवश्यक छैन र मस्त खोपडी प्राप्त गर्दैन
च्याट भावनाहरु ? (मोबाइल,) →